नागरिक समाजले कहाँबाट भेट्यो चार जना कोरोना संक्रमित नेपालमा? – MySansar
नागरिक समाजले कहाँबाट भेट्यो चार जना कोरोना संक्रमित नेपालमा?
नेपालमा अहिलेसम्म कति जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्? यो ब्लग तयार पार्दासम्म सरकारले आधिकारिक रुपमा बताएको तीन जना हो। त्यसमध्ये एक जना दुई महिना पहिले भेटिएका हुन् र अहिले स्वस्थ भइसकेका छन् भने दुई जना भर्खरै भेटिएका हुन्। उनीहरुको उपचार भइरहेको छ। तर नागरिक समाजले भने आफ्नो विज्ञप्तिमा चार जना कोरोना संक्रमित भएको लेखेको छ। बाह्रखरीमा प्रकाशित समाचार अनुसार डा. महेश मास्के, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेललगायत नागरिक अगुवाले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी विभिन्न सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि जारी विज्ञप्तिमा चार जना कोरोना संक्रमित भेटिएको उल्लेख छ। हैन, सरकारले पनि नभेटेको चौथो कोरोना संक्रमित यी नागरिक अगुवाहरुले कहाँबाट भेटे हँ?
स्वास्थ्य मन्त्रालले आज जारी गरेको तथ्याङ्क हो यो। यही तथ्याङ्क हेरेर पोजेटिभ ३ जना, उपचार पछि सन्चो भएको १ जना अर्थात् ३+१= ४ गरेको हिसाब त हैन यो ? यदि त्यसो गरिएको हो भने जोड्ने हैन घटाउने हिसाब हो यो भनेर बुझ्नु पर्ने हो।
झुक्किएर एक ठाउँमा ३ को ठाउँमा ४ लेखिएको पो हो कि भन्ने लागेको भए विज्ञप्ति पूरै हेर्नुस्, एक ठाउँमा मात्र हैन दुई ठाउँमा ४ जना लेखिएको छ।
यसबाहेक अरु सुझावहरु भने मननीय छन्। यस्तो छ विज्ञप्ति-